စက်ဘီးဘဲလ်သံ ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှ စက်ဘီးဘဲလ်သံ အကြောင်းသင်သိရန်လိုအပ်သည်။
JANG HORNG ENTERPRISE CO.,LTD. စက်ဘီးဘဲလ်သံ ထုတ်လုပ်သူနှင့်ထုတ်လုပ်သူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအများအပြားရှုထောင့်ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှု၎င်း၏အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖောက်သည်များ,0န်ထမ်းများနှင့်မိတ်ဖက်များအားရေရှည်တန်ဖိုးထားခြင်းအားဖြင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ထူးချွန်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု. ကိုဆက်သွယ်ပါ။ အခမဲ့ခံစားရပါ။ ။
ပုံစံ - JH-500B/JH-500BB/JH-500CP/JH-500P
ထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20/box 200pc/ctn.,1.၄ အုပ်
ဆး.ဒဗလျူ.:7 KGSG.ဒဗလျူ.:၉ ကီလိုဂရမ်
တည်ဆောက်ခဲ့သည်-သံလိုက်အိမ်မြှောင်၌ ဦး တည်ချက်ယေဘုယျသဘောကိုပြသည်.မှတ်ချက်:သံလိုက်အိမ်မြှောင်ပတ်ပတ်လည်တွင်သံလိုက်ဓာတ်ပစ္စည်းများရှိလျှင်,သံလိုက်အိမ်မြှောင်သည်အလုပ်မလုပ်ပါ.
Universal bike bell သည်စက်ဘီးအများစုနှင့်အံကိုက်ဖြစ်သည်’s လက်ကိုင်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.bike-bell.com/my/bike-bell-ring.html
အကောင်းဆုံး စက်ဘီးဘဲလ်သံ ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် စက်ဘီးဘဲလ်သံ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ စက်ဘီးဘဲလ်သံ ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ပစ္စည်း:ပလပ်စတစ်အောက်ခံနှင့်လီဗာ.အရွယ်အစား:၅၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1 pc/PE,10pc/box 200pcs/ctn.၁.၆ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ်ဂျီ.ဒဗလျူ.:၁၂ ကီလိုဂရမ် 22MM Pipe Handlebar အတွက်သက်တံ့ရိုက်နှိပ်အသုံးအဆောင်ပါသောစက်ဘီးဘဲလ် သတိပေးချက်ဘဲလ်:အလူမီနီယံစက်ဘီးလက်စွပ်ခေါင်းလောင်းကိုလုံခြုံရေးသတိပေးခေါင်းလောင်းအဖြစ်တောင်တက်စက်ဘီးများနှင့်လမ်းဘီးများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်. တာရှည်ခံအသုံးပြုမှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောပစ္စည်းများ:စက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောအလူမီနီယမ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသည် တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်:စက်ဘီးများအတွက်လက်ကိုင်ပြွန်အပြင်ဘက်အချင်းသည် ၂၂ မီလီမီတာရှိသည်.ဝက်အူလှည့်ဖြင့်ဝက်အူလှည့်ကိုလက်ကိုင်ဘားတွင်ဝက်အူကိုတင်းကျပ်လိုက်ပါ. CRISP တီးမှုတ်သံကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာနားထောင်ပါ:ဖက်ရှင်အမြင်နှင့်အတူအလူမီနီယံစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံမြည်သံကိုအမြဲပေးသည်
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-အလွိုင်း,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၃၈ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,20 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၁.၄ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:6 KGS G.ဒဗလျူ.:၈ ကီလိုဂရမ် ရောင်စုံပန်းပုံစံ–အနုပညာဆန်တယ်&အရောင်အသွေးစုံဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည် ၀ ယ်သူတိုင်းအတွက်ခေတ်စားသောစက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်. လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်
ပစ္စည်း:ထိပ်တန်း-သံမဏိ,အခြေခံပလပ်စတစ်.အရွယ်အစား:၅၀ မီလီမီတာထုပ်ပိုးသည်:1pc/PE,10 PCS/သတျတော.200 PCS/CTN.၂.၂ အုပ်.ဆး.ဒဗလျူ.:8 KGS G.ဒဗလျူ.:၁၀ ကီလိုဂရမ် မင်းရဲ့လုံခြုံမှုကိုဂရုစိုက်ဖို့ဒီဇိုင်းမှာတောက်ပတဲ့ဒီဇိုင်း,ဤစက်ဘီးခေါင်းလောင်းသည်လူတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ်စက်ဘီးအသုံးအဆောင်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် အသံမြည်သည်&ရှင်းလင်းသော-ရှင်းလင်းပြီးကျယ်လောင်သောဖုန်းမြည်သံသည်လမ်းသွားလမ်းလာများအားလျင်မြန်စွာသတိပေးနိုင်ပြီးလုံခြုံသောစီးနင်းမှုကိုပေးနိုင်သည်.လက်ရာမြောက်သော&တာရှည်ခံသည်-ဂန္ထဝင်လူမီနီယံခေါင်းလောင်း၏မျက်နှာပြင်ကိုသံချေးတက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်၎င်းကိုတာရှည်ခံ။ လှပစေသည် အသုံးပြုနိုင်သောစက်ဘီးအမျိုးအစားများ-လက်ကိုင်အချင်း ၂၂ ရှိစက်ဘီးအများစုအတွက်သင့်တော်သည်.၂ မီလီမီတာ,စက်ဘီးအမျိုးအစားအများစုအတွက်သုံးနိုင်ပါတယ်,စကူတာများ,သုံးဘီးဆိုင်ကယ်များ,စသည်တို့. တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်-ခက်ခဲသောတပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မရှိပါ,အလွယ်တကူတပ်ဆင်ရန်ဝက်အူလှည့်တစ်ခုသာလိုသည်.ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင်,ကျေးဇူးပြုပြီးမနေပါနဲ့’ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်